kuremara | Karmanhealthcare.com
Tag Archives: kuremara
Kunge chero mimwe michina, mawiricheya anoda kugadziriswa nezvikonzero zvakawanda. Kuchengetedza kwakakodzera kunobatsira kuwedzera hupenyu hwewiricheya uye kudzivirira kubva pakuputsa. Kubatsira kukuru kwekugara uchigadzirisa pawiricheya kuita kwechigaro. Iine zvikamu zvinoshanda zvakanaka, inozodzikisa kudhonza pawiricheya uye ichifambiswa nyore. […]
Kune akawanda maekisesaizi ayo vanhu vari mumawiricheya vanokwanisa kuita kuti vawedzere kutsungirira, kufamba, mhasuru uye kudzivirira kurwadza kwemajoini kana kukuvara. Wese munhu ane akasiyana pokutangira. Zvakaoma kune vakawanda kutanga kurovedza muviri uye kuti rutsigiro rwakawedzerwa runogona kuve mutsauko. Heano mamwe matipi ekurovedza muviri asi yeuka kubvunza […]
Vashandisi veWiricheya vane zvipingamupinyi zvakawanda zvekukunda saka zvinoonekwa sevamiriri vechokwadi mumakwikwi akaita semarathoni nemitambo. Nehurombo, havasi vese vashandisi vewiricheya vanokwanisa kukwikwidza mumarathoni kana mitambo nekuda kwemamiriro epanyama kana akasarudzika mamiriro. Kune rimwe divi, vazhinji vanokwanisa kukwikwidza. Ivo kazhinji vanofanirwa kudzidzisa zvakanyanya kwemaawa. […]
Vanhu vane mawiricheya vanogona kutamba mitambo. Kune mhando dzakasiyana dzemitambo yekusarudza kubva uye dzinogona kukwikwidza mumitambo mune mimwe yemitambo. Ramba uchiverenga kuti udzidze zvakawanda nezve mimwe mitambo yewiricheya, inozivikanwawo semitambo inochinja. Basketball ndeimwe yemitambo inozivikanwa kwazvo kune vashandisi vewiricheya. Mitemo inosara […]
Ndeipi imbwa inonyanya kukodzera munhu ari pawiricheya inowanzo pindurwa zvine musoro. Vazhinji vachati iyo Goridhe Retriever kana iyo Labrador ndiyo yakanakisa nekuti ndiwo anonyanya kuzivikanwa marudzi ekubasa. Nekudaro, vamwe vanozoona kuti avo masimba esimba anogona kunge asina kunyatsoenderana nemhando idzi. Zvisinei, pane […]
Mawiricheya mazhinji anogadzirwa nezvinhu zvakaita sesimbi, aruminiyamu, rabha, plastiki, uye upholstery. Izvi zvinhu zvinovimbisa mhando yemhando yepamusoro uye zvinodzivirira wiricheya kubva pakudambuka pakutanga kwehupenyu hwayo. Mashandisiro ezvinhu zvacho Ruzhinji rwewiricheya rinoumbwa ne […]
Wiricheya yoga ndeye yakareruka vhezheni yeyoga, munhu anozvinyima wechiHindu, uye nekurayiridza kwemweya. Izvi zvinosanganisira kufungisisa, kudzora mweya uye mamiriro anoita nemuviri. Iyo ine zvakawanda zvakanaka zvehutano uye inobatsira kusvika padanho repamusoro rekuzorora. Kutenda kurerutswa kweyoga kune vashandisi vewiricheya ivowo vanogona kuidzidzira kuti vabatsirwe kubva […]
Hondo yekutengeserana iri pakati peUS neChina inogona kukanganisa indasitiri yewiricheya nevatengi vayo. Mutengo wechigaro chemawiricheya unogona kukwira kana hondo yezvino yekutengeserana ichienderera. Makambani anowana mari pakutenga zvinhu zvakasikwa simbi iyo yavanofanira kubhadhara mitero. Imwe mari inowedzera painotengeswa kunze kwenyika muchimiro cheimwe […]
Wiricheya yekutanga yemagetsi yaive Klein Drive Chair iyo yakagadzirwa neCanada gadziri George Klein nechikwata chake muna 1953. Chikwata chake chakagadzira yakasarudzika pasuru yetekinoroji ayo achiripo maficha emawiricheya emagetsi nhasi. Wiricheya ekutanga emagetsi ainyatsove akafanana mawiricheya ane mota yakasungirirwa. Wiricheya yemagetsi inofambiswa […]
Posted in Mawiricheya asingaremi, Retail, Time Machine, hwiricheya, Wiricheya Nhau	| Tagged kuremara, isina kurema wheelchair, kufamba, famba, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu	Leave mhinduro
Zvinosemesa here kushandisa wheelchair sechikamu chekupfeka? Kunze kwekunge iwe uchinyatso kuda chinongedzo chekufamba, saka hongu. Iine Halloween padhuze nekona, vanhu parizvino vari kuuya pamwe kana kuti vakatogadzirira mbatya yavo. Kunyange paine zvipfeko zvakawanda zvisinga gumbure, pane vanhu vashoma vanozove […]